ဖြေပေးနော်…. – PoemsCorner
လူတိုင်း ချစ်တတ်တယ် …. ဒါပေမယ့် ချစ်တတ်ဖို့တော့ လိုတယ်
လူတိုင်း စိတ်ကူးယဉ်တတ်တယ် …. ဒါပေမယ့် အကောင်အထည်ဖော်တတ်ဖို့တော့ လိုတယ်
လူတိုင်း ချစ်သူကို အကောင်းဆုံးတွေ ပေးချင်ကြတယ် …. အဲဒါ နောက်ထား …
နားလည်မှုလေး ပေးတတ်ဖို့လိုတယ် …..
ချစ်တတ်တယ်ဆိုတိုင်း၊ စိတ်ကူးတွေ လှပတိုင်း၊ အကောင်းဆုံးတွေ ပေးချင်ပါတယ်လို့
ပြောတိုင်း ချစ်သူကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်လားဗျ၊ ….
In: Others Posted By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) Date: May 20, 2011
Leave comment6Comments & 400 views
By: Pipi at May 20, 2011
Phit Lar Naing Par [email protected]…………….
By: zin zin at May 21, 2011
နားလည်မှု မပေးနိုင်ရင်တော့ .. ပြည့်ပြည့်ဝဝ ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်ပါတယ် ..
By: xeroxone7 at May 24, 2011
ပြောတိုင်း ချစ်သူကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်လားဗျ၊ …
ဒီမေးခွန်း၇ဲ့ အဖြေကို ဖြေကြည့်မယ်နော်
……..ဒီလို ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာက ချစ်သူကို ဘယ်လို ချစ်၇မယ် ချစ်နည်း ချစ်ဟန်တွေ သိတာကို ဆိုလိုတယ်…အဲဒီတော့ ချစ်သူကောင်းပဲ..သိတဲ့အတိုင်း လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်။
စိတ်ကူးတွေ လှပတိုင်း .အကောင်းဆုံးတွေ ပေးချင်ပါတယ်လို့ ပြောတိုင်း …..
………ဆိုတာက ချစ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးတွေ ဖန်တီးပေးချင်တယ် ပေးဆပ်ချင်တယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးချင်တဲ့ စေတနာတွေပဲ ချစ်သူကောင်းပဲ
တခုတော့ ရှိတယ် ပြောနေ၇ုံနဲ့တော့ မ၇ဘူးပေါ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသူအတွက် ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဇော လေး တခုသာ ရှိက ဘာမဆို ဖြစ်အောင် လုပ်၇င် ဖြစ်ပါတယ် ဇွဲ သတ္တိ လိုမယ်။ အခွင့်ေ၇းမပေးဘူးဆိုပြီး ထိုင်မနေသင့်။ ဥာဏ်နဲ့ဆင်ခြင် နည်းလမ်းရှာ။ မဖြစ်နိုင်တာ မရှိပါ မဖြစ်ချင်လို့ ပြင်းပြမနေသော စိတ်ကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာ။
အဲဒီတော့ အားလုံး ခြုံပြောရရင် မုဒုံစောင်က အကောင်းဆုံးပါပဲ
ကိုလိပ်ပြာက ချစ်သူ ကောင်းလေးနဲ့ တွေ့မှာပါ။ ဟိုဥပမာထဲကလိုပေါ့ သံလိုက်ကို မြေကြီးမှာ ချလိုက်၇င် ကျောက်စ၇စ်ခဲတွေ ခဲလုံးတွေ လာမကပ်ပါဘူး တဲ့ မြေကြီးထဲက သံလေးတွေ သာ လာကပ်တာ တဲ့။ကိုယ်ကသာ သံလိုက်ဖြစ်ပါစေပေါ့။ ပျော်၇ွှင်ပါစေဗျာ။
By: မယ်မနော at May 28, 2011
By: MyoZin at Jul 6, 2011
tay char tar ka dot sate kyi nu hmu ko ya hmar par.